रगतमा भएको भिटामिन ‘डी’को आधारमा मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सकिने ! « MNTVONLINE.COM
अध्ययनमा ४० देखि ७९ बर्षसम्ममा मानिसहरुलाई समावेश गरिएको थियो । उनीहरु माथि सन् २००३ देखि २००५ सम्म अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनमा एक हजार ९७० जना संलग्न भएका थिए । अध्ययनको नेतृत्वकर्ता डा. एन्टोनिओले भने, “भिटामिन डिको अवस्थाको अध्ययनले तत्कालिन स्वास्थ्य अवस्थादेखि भविष्यमा आउनसक्ने स्वास्थ्य चुनौती र मृत्युसम्मको कुरालाई पनि पुर्वानुमान गर्न सक्ने देखिन्छ ।” उनको टोलीले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन हालै मात्रै तयार भएको हो ।
राज्यद्रोहको आशंकामा पक्राउ परेका रुसी वैज्ञानिकको मृत्यु
छुटेका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन आग्रह